I-Plex.Earth Viewviews ibonelela ngeengcali ze-AEC ngemifanekiso yakutshanje yesathelayithi ngaphakathi kwe-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Plex.Earth Ixesha lokujonga ukubonelela ngeengcali ze-AEC ngemifanekiso ye-satellite yamva nje kwi-AutoCAD
I-Plexscape, abaphuhlisi bePlex.Earth®, esinye sezixhobo ezaziwa kakhulu zeAutoCAD ukukhawulezisa ukwakhiwa, iiprojekthi zobunjineli nolwakhiwo (AEC), kusungulwe iTimesviews ™, inkonzo ekhethekileyo kwimarike ye-AEC yehlabathi, eyenza Uninzi lwemifanekiso yesatellite ehlaziyiweyo efikelelekayo kwaye ifikeleleka ngokulula ngaphakathi kwe-AutoCAD.
Ukulandela ubudlelwane bobuchule ne-bird.i, inkampani edibanisa imifanekiso ye-satellite yamva kunye nobukrelekrele bokubonelela ngolwazi oluxabisekileyo, I-Plex.Earth Ixesha lokujonga lifikelela ukufikelela kwimifanekiso ye-satellite yamva nje yababoneleli besatellite abaphambili behlabathi: iMaxar Iitekhnoloji / i-DigitalGlobe, i-Airbus kunye nePlanethi: sibonisa imodeli yamaxabiso akhethekileyo: nayiphi na ingcali ye-AEC ngoku inokufumana ukufikelela ngokukhawulezileyo kwi-Timeviews i-premium satellite yedatha yokucwangciswa okungcono ngokubhaliselwa kwePlex.Earth kwenyanga.
Ukuza kuthi ga namhlanje, ukusetyenziswa kwemifanekiso yesatellite yentengiso kubandakanya indleko eziphezulu, ukulibaziseka okubalulekileyo kunye nemfuno yenqanaba elithile lamava ukuqhubekeka nokuhlalutya idatha. Ukongeza, imifanekiso yasimahla yesatellite ihlala iphelelwe lixesha, ikumgangatho ombi kwaye ayisoloko inikezela amaphepha-mvume awaneleyo okusetyenziselwa urhwebo okanye ukwenziwa kwemisebenzi yokuphuma. Iidrones kunye nezifundo zomhlaba, kwelinye icala, zifuna ubukho bendawo, ekhokelela kulibaziseko kunye neendleko zokufuduswa kwezixhobo, kwaye ziphantsi kolunye uthintelo olunokwenzeka (imozulu engalunganga, imimandla yeendiza ngaphandle kweedrone, njl.) .
I-Plex.Earth Ixesha lokujonga libeka isiphelo kule mida ngokwenza idemokhrasi ukufikelela kwimifanekiso yesatellite ephezulu kunye nephezulu ye-AutoCAD, kungekudala nakwezinye iiplatifomu zeCAD. Ngokufikelela ngokulula nangokukhawuleza kwidatha ye-satellite ye-premium, iingcali ze-AEC zinokuba nembono ephezulu kakhulu yendawo ekujolise kuyo ukuba ziqonde ngcono imeko yeprojekthi yazo, zenze izigqibo ezizizo kwaye ziphephe iimpazamo ezixabisekileyo, ukusukela ekuqaleni kwenkqubo yoyilo.
Ukongeza, ixesha lokujonga ixesha livumela iinkampani zalo naluphi na ubungakanani ukuba zibeke esweni inkqubela phambili yeeprojekthi zazo eziqhubekayo (kunye nezo zokhuphiswano), jonga ukuba indawo yomdla ivela njani ekuhambeni kwexesha okanye kuvavanywa impembelelo yokwenyani yeentlekele zendalo kwiindawo zomsebenzi. .
"Iminyaka elishumi edlulileyo, njengenjineli yezobuchwephesha, ndavavanya iindleko zokwenyani zokuphinda ndisebenze kwakhona, nto leyo eyandikhokelela ekubeni ndiphuhlise isixhobo esinxibelelanisa ngokuthe ngqo i-AutoCAD kunye neGoogle Earth," utshilo uLambros Kaliakatsos, umsunguli kunye ne-CEO yePlexscape. “I-Plex.Earth ngoku ikwisizukulwana sayo sesine kwaye umbono wethu usahleli ufana: ukuphelisa imfuneko yokuba iinjineli zibe kwindawo yokucwangcisa ingqikelelo kunye noyilo lokuqala lweeprojekthi zabo. I-Timeviews™, inkonzo yethu entsha yeprimiyamu, linyathelo elingaphaya kolu sukelo, livula ufikelelo okokuqala ngqa kuye wonke umntu kumfanekiso wesathelayithi wamva nje wehlabathi kunye nokuqonda okubalulekileyo okuza nawo.
I-Plexscape yinkampani yesoftware ezimisele ukutshintsha indlela iinjineli ezisebenza ngayo kwiiprojekthi zoLwakhiwo, ubuNjineli kunye nezoLwakhiwo (AEC), ngokuphuhlisa izisombululo ezizezona zivala umsantsa phakathi koyilo nelizwe lokwenyani.
Plex.Earth, imveliso yethu yeflegi, sisoftware yokuqala esekwe kwilifu eyenziweyo kwintengiso ye-CAD kunye nesinye sezixhobo ezithandwa kakhulu kwiVenkile yeVenkile yeVenkile. Isisombululo sethu, esasungulwa ngo-2009, sisetyenziswa ngamawaka eenjineli kumazwe angaphezu kwe-120 kwihlabathi liphela, sibenza ukuba babe nembono epheleleyo ye-3D yendawo yabo yeprojekthi yokwenyani ngemizuzu, ukusuka kuGoogle Earth, iimephu zeBing kunye nezinye iinkonzo zemephu. kunye nababoneleli abahamba phambili bezentengiso (iMaxar Technologies / DigitalGlobe, iAirbus kunye nePlanethi).
Ukuze ufunde kabanzi malunga neenzuzo zePlex.Earth, tyelela www.plexearth.com